UngaliBuyisa njani ishishini lakho ngaphandle kokulahlekelwa yiTrafikhi | Martech Zone
UngaliBuyisa njani ishishini lakho ngaphandle kokulahlekelwa yindlela
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 16, 2016 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 16, 2016 Natasa Djukanovic
Iinkampani ezininzi azinayo yonke into efumanekayo kumzuzu wokuphehlelela iwebhusayithi yabo. Ngokuchasene noko, phantse iipesenti ezingama-50 zamashishini amancinci awanayo iwebhusayithi, kungasathethwa ke ngomfanekiso wophawu abafuna ukuwenza. Iindaba ezimnandi kukuba awunyanzelekanga ukuba yonke into uyicinge ngqo kululwane. Xa usaqala, eyona nto ibaluleke kakhulu yile - ukuqala. Uhlala unexesha lokwenza utshintsho kunye nerebrand. Njenge-CMO yeDomain.ME, opharetha wamagama .ME wesizinda, ndibona iiprojekthi ezincinci nezikhulu zokuphinda zenziwe yonke imihla.
Izizathu ezibangela ezi projekthi zahluka. Abanye abantu banyanzelwa ukuba batshintshe igama lophawu lwabo ngokudityaniswa, okanye kunokuba nento yokwenza nomfanekiso wangoku webhrendi, kwaye ezinye iinkampani zifuna nje ukuzama!
Nokuba siyintoni na isizathu, inye into eqinisekileyo- ufuna ukugcina ishishini lakho liqhuba ngokutsha. Kodwa ungabagcina njani abathengi bakho abaqhelekileyo beza emnyango xa utshintshe uphawu, igama, umbala kunye nayo yonke into abanokuyifumana iqhelekile?
Isitshixo sokwenza abathengi bakho babe yinxalenye yerebranding yakho. Ukuzibandakanya kunye nengxelo rhoqo evela kubaphulaphuli bakho yeyona nto ibalulekileyo kutshintsho olunempumelelo. Ngokufanelekileyo, abameli bakho abathembekileyo bebhrendi baya kusebenza njengeqela lovavanyo kwinkangeleko yakho entsha. Baphulaphule, wenze uphononongo ukuba uyakholelwa ukuba unokufumana ingxelo evelisayo, kwaye ubavumele ukuba babe yinxalenye yeshishini lakho. Abantu bayakuxabisa ukubandakanyeka kwaye kunokwenzeka ngakumbi ukuba bacebise kwaye baxhase uphawu lwakho ukuba baziva ngathi bakuncede wayakha kwasekuqaleni.
Kuthekani NgeWebhusayithi Yam?
Ukugcina ukugcwala kwakho kunye nenqanaba lakho olizuze nzima kwinkqubo yokuphinda wenze igama ngokutsha kunye nokutshintsha igama lakho lesizinda ngokuqinisekileyo kuya kuba nzima. Zilungiselele ukuba ngokuqinisekileyo uya kuphulukana nezinye iindwendwe (kunye nentengiso ethile) ngenxa yesi sithembiso. Nangona kunjalo, umphumo wokugqibela unokwenza ukuba konke kukufanele kwaye utshintsho olucingisisiweyo lunokunciphisa umonakalo. Le mithetho mihlanu iya kukuqalisa:
Yazi imithombo yakho yendlela - Uzakufuna isishwankathelo esineenkcukacha sokuba isuka phi itrafikhi yakho (olu lwazi lufikeleleka ngokulula kwizixhobo zakho zoHlaziyo lukaGoogle). Nika ingqalelo kwizitishi eziqhuba elona nani liphezulu lezithuthi- kwaye uqinisekise ngokuqinisekileyo ukuba abaphulaphuli babo bayaziswa malunga nokutshintsha ngokutsha kunye nokutshintsha kwesizinda. Thatha ixesha lokuphuhlisa isicwangciso esiya kuthi sijolise kwezi ndlela ezithile kwaye ubazise ngotshintsho ngokukhawuleza nangempumelelo.
Gcina iindwendwe kwiphepha elinye - Wakhe weva malunga nokuhanjiswa okungama-301? Ezi ndawo zithumela indawo kwi-URL eyahlukileyo kunaleyo bangena kuyo kwisikhangeli sabo okanye bacofa kuluhlu lweziphumo zophando. Oku kunceda ukuqinisekisa ukuba abathengi bakho abangaqapheli ngokutsha kwakho kunye notshintsho lwesizinda baqhutywa kwindawo yakho entsha. Emva kokuba uvelise ingxelo ye-backlink kunye nokuseka ukuba yeyiphi imithombo ekhankanya iwebhusayithi yakho, uya kufuna ukuqinisekisa ukuba zonke ezo URL zikhomba kwidilesi yakho yewebhu entsha. Unokufuna ukuqesha ingcali ngeli nyathelo.
Tsala iplagi - Emva kokuba uhlolisise yonke into kabini kwaye abaphulaphuli bakho bazisiwe ngokufanelekileyo malunga notshintsho, inyathelo elilandelayo kukumilisela iwebhusayithi yakho entsha. Okwangoku, uya kufuna ukuba iakhawunti yakho yeGoogle Analytics kunye neKhonkco yakho yoKhangelo idityaniswe nedomeyini yakho entsha. (Jonga iDouglas's Uluhlu lokutshintsha kwesizinda aphaAyisiyiyo loo nto kuphela, kodwa kuya kufuneka ugcine uphawu lwakudala luhlala kwii-meta tag kunye neekopi zombhalo zempahla yakho entsha ukuze iinjini zokukhangela zikwazi ukulufumana kwaye zilukhombise ngokufanelekileyo olo tshintsho.
Hlaziya amakhonkco akho kunye noluhlu- Zonke izikhombisi zeshishini ezibonisa indawo yakho kufuneka zihlaziyiwe- kwaye ukuba utyale imali kwi-SEO yendawo kwaye unamakhulu amakhonkco kwiikhombisi zeshishini kwi-intanethi iyakutya ixesha. I-backlinks, njengaleyo yerejista yeshishini, zizalathi zokufaneleka kwakho kunye nobukho bakho kwiwebhu. Fikelela kwiiwebhusayithi ezinxibelelane nawe kwixa elidlulileyo kwaye ubacele ukuba batshintshe ikhonkco labo kwi-URL yakho entsha ukuze uqhubeke nokusebenza kakuhle kwiziphumo zeinjini yokukhangela.
Nyusa, phucula, khuthaza - Lungiselela i-PR, ukuthumela iindwendwe, izibhengezo ze-imeyile, i-PPC kunye nawo onke amajelo akho entengiso yedijithali ukwazisa abantu ukuba ulapho kunye nomfanekiso omtsha wesizinda kunye nesizinda. Ezi ndleko zinokukuphumelela nakwezona zikhokelo zintsha, kwaye ngokuqinisekileyo ziya kuzinceda iinjini zokukhangela ukuba zikhombe ulwazi lwakho kunye nefayile yotshintsho ngokufanelekileyo. Iprojekthi yokuhlengahlengisa ngaphandle kwephulo lokuthengisa yinkcitho nje, ke jonga nakolo tyalo mali.
Utshintsho luqhelekile kwilizwe leshishini kuzo zombini iinkampani ezintsha nezisungulwe. Ukwazi indlela yokuphila kunye nokuchuma kolu tshintsho kubaluleke kakhulu, ke yenza umzamo owongezelelweyo wokubonisa ishishini lakho kokona kukhanya.
tags: utshintsho lwesizindaUluhlu lokujonga uluhlu lokutshintshangokutshaUkubuyiswa kwakhona
Ingcali yezoqoqosho ngemfundo, uNatasa Djukanovic ngumlawuli wentengiso kunye nentengiso Idilesi.ME, inkampani yezobuchwephesha yamanye amazwe eqhuba i-intanethi ye-intanethi ".ME." Uchithe wonke umsebenzi wakhe kwimpambano yeebhanki, imidiya yoluntu, ubunkokeli kunye netekhnoloji, kwaye uhlala ezama ukufumana imfihlelo yokuba kwiindawo ezintathu ezahlukeneyo ngaxeshanye.
Ungalwandisa njani uguquko kunye neMikhombandlela yakho
I-SocialReacher: Yintoni iAdvocate yabasebenzi bezeMidiya yoLuntu?